Gudoomiye Baarlamaan iyo Madaxweyne kuxigeen maanta lagu doortay Gaalkacyo | Dhexnimo Media
Home Wararka Gudoomiye Baarlamaan iyo Madaxweyne kuxigeen maanta lagu doortay Gaalkacyo
Gudoomiye Baarlamaan iyo Madaxweyne kuxigeen maanta lagu doortay Gaalkacyo
Waxaa maanta Koonfurta magaalada Gaalkacyo kulan ku yeeshay Xildhibaano uu dhawaan magacaabay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Xildhibaanada ku shiray magaalada Gaalkacyo ayaa Gudoomiye Baarlamaan u doortay Xareed Cali Xareed oo horey usoo noqday Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka koobaad ee Galmudug.
Waxa ay sidoo kale Xildhibaanada ku shiray magaalada Gaalkacyo Madaxweyne kuxigeen u doorteen Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye , Dooarshadan ayaana noqoneysa mid kale oo uga soo dartay xaalada Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa xilkiisa u tartamin waxa uuna sheegay in wali xilkiisa uga harsan yahay mudo labo sano ah uuna sii shaqeenayo, waxa uuna Xaaf u hambalyeeyay Gudoonka Baarlamaanka iyo Madaxweyne kuxigeenka la doortay.
Galmudug ayaa hada yeelatay labo Madaxweyne oo kala ah Xaaf iyo Sheekh Shaakir , waxaa sidoo kale la filayaa in isbuuca soo socda magaalada Dhuusomareeb Madaxweyne loogu doorto Madaxweyne kale dowlada raali ka tahay.
Previous articleMadaxweyne Trump oo ku dhawaaqay qorshiisa nabadeynta ee bariga dhexe
Next articleDawladda Ruushka oo indhaha ku haysa saldhig ciidan oo ay ka samaysto Berbera